APK များကို Google Play စတိုးမှမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နည်း Androidsis
APKS ကို Google Play စတိုးမှမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နည်း
Francisco Ruiz | | APK, လဲ tutorial
လက်တွေ့ကျတဲ့ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကိုရှင်းပြပေးပါတယ် APKS ကို Google Play စတိုးမှတိုက်ရိုက်ရယူပါတရားဝင် Google Play repository မှမည်သည့်ကြားခံမျှမပါဘဲ။
သင်လိုချင်လျှင်သင်သိ APK ပုံစံဖြင့်အက်ပ်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါသင်၏ Android ထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးမပြုနိုင်သောပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း (သို့) မျှဝေခြင်းများပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုဆက်ဖတ်ပါ။
1 Play Store တွင်ရှိသောမည်သည့်အခမဲ့ application ကိုမဆို APK format ဖြင့် download ပြုလုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်ချက်များ
2 Web Chrome Store မှ Google Chrome အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ကိုအခမဲ့ Download လုပ်ပါ
3 APKS ကို Google Play စတိုးမှမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နည်း။ Google Play စတိုးအတွက် APK Downloader ကိုအသုံးပြုခြင်း။
Play Store တွင်ရှိသောမည်သည့်အခမဲ့ application ကိုမဆို APK format ဖြင့် download ပြုလုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်ချက်များ
ဖြည့်ဆည်းရန်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာထိုအရာဖြစ်သည် ၀ က်ဘ်ဘရောက်ဇာတစ်ခုအနေဖြင့် Google Chrome ထည့်သွင်းထားသောကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိသည်။ သင် Windows, MAC သို့မဟုတ် Linux အသုံးပြုသူများဟုတ်မဟုတ်ကိုအရေးမကြီးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Google Play Store မှ APKS ကိုတိုက်ရိုက် download လုပ်ရန်လိုအပ်သောအရာများသည် Google Chrome အတွက်အခမဲ့ extension ဖြစ်သည်။
Web Chrome Store မှ Google Chrome အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ကိုအခမဲ့ Download လုပ်ပါ
တတ်နိုင်ရန်လိုအပ်သော extension ကို download လုပ်ပါ မည်သည့် APK ကိုမဆို Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ, Android အတွက်တရားဝင် app စတိုး သင်လုပ်ရန်မှာဤ link ကိုနှိပ်ပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏ Google Chrome ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှ။
အောက်ပါကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးသင်တိုးချဲ့မှုကိုတပ်ဆင်ရန် "Add to Chrome" ကိုသာနှိပ်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ apk ဒေါင်းလုပ် extension ကို သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိခရုမ်းဘရောင်ဇာတွင်ဂူဂဲလ်ခရုမ်း taskbar ပေါ်တွင်အိုင်ကွန်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် -
ဒီနည်းနဲ့ Chrome web browser ကိုအဆင်သင့်လုပ်ထားပါလိမ့်မယ် Google Play တွင်တင်ထားသောအခမဲ့ APK ကို download လုပ်ပါ.
APKS ကို Google Play စတိုးမှမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နည်း။ Google Play စတိုးအတွက် APK Downloader ကိုအသုံးပြုခြင်း။
Play Store တွင်သိမ်းထားသော APK များအား download လုပ်ခြင်းသည် Android application စတိုးကို၎င်း၏ Web ဗားရှင်းတွင်ကြည့်ရှုခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ, သင်စိတ်ဝင်စားသောအခမဲ့လျှောက်လွှာကိုရှာပါAPK format ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူချင်သော application ၏မေးခွန်းကိုဖွင့်ပြီးလျှင်၊ Chrome taskbar တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော apk downloader အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။
ထိုအိုင်ကွန်ကိုသင်နှိပ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်ပြသထားသောစာမျက်နှာကဲ့သို့သောစာမျက်နှာကိုဖွင့်သင့်သည်။ ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးနေသည့်အပလီကေးရှင်း၏အမည်ကိုပြလိမ့်မည်။ apk format ဖြင့်တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်မည့်ခလုတ်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်း.
လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာဒီကိုစတင်သည့်အချိန်မှာမင်းကိုငါထားခဲ့တာကိုပြသခြင်းအားဖြင့် လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသို့တိုက်ရိုက် download လုပ်လိမ့်မည် အလွန်ရှည်လျားသောအက္ခရာနံပါတ်ပါသောဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သောအမည်တစ်ခုကိုပေးခြင်းဖြင့်လျှောက်လွှာကိုအမည်ပြောင်းရန်အကြံပြုလိုသည်။ .apk တိုးချဲ့မှုကိုအမြဲလေးစားသင့်သည်မှာသေချာသည်.
ကျွန်ုပ်သည် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်သည် ထပ်မံ၍ အခမဲ့လျှောက်လွှာများကိုဒေါင်းလုပ်ရယူရန်အတွက်တရားဝင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးကတည်းကအခကြေးငွေပေးထားသော application များနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ.
ထိုအရာသည်ရရန်အလွန်လွယ်ကူသည် မည်သည့် APK ကိုမဆို Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ မည်သည့်ကြားခံကိုမှမဖြတ်ဘဲ downloaded apk နှင့်ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီဆိုတာသင်သိပါစေ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ဒေါင်းလုပ်ချထားသောလျှောက်လွှာ၏မှန်ကန်မှုကို ၁၀၀ x ၁၀၀ တွင်သေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » APK » APKS ကို Google Play စတိုးမှမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နည်း
Samsung Galaxy A70 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်၊ ဈေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
Pocophone F1 ဂိမ်း Turbo မုဒ်ကိုရရှိသည်